WOWOW Sink Finket Sink Fucet 4 Inch Center oo Saliida Saran Oo Xajmi Lagu Daray
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Sink Finket Sink Fucet 4 Inch Center oo Saliid Lagu Talo Oo Lagu Daruubay
qiimeeyay 5.00 out of 5 ku salaysan 17 ratings macaamiisha
(17 dib u eegista macaamiisha)
QALBADA WOWOW 100 boqolkiiba MACLUUMAADKA Tijaabiyey - dhammaan tubooyinka lagu falanqeeyay cadaadiska biyaha sare ee adag si loo dammaanad qaado tayo sare iyo adkeysi. 4 inch tubooyinka musqusha baahsan, dhismaha naxaasta oo tayo sare leh qurux heer sare ah oo loogu talagalay naqshadeynta Jiritaanka Casriga.
232120RB tilmaamaha rakibaadda
Qolka madow ee musqulaha musqulaha 2321200RB faahfaahinta: Haddii aad ka fiirsaneyso alaabadayada ugu dambeysa, fadlan ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto sicirka qiimaha. XARUNTA; Fasaxa naqshadeynta biyaha ee bulukeetiga oo ay kujiraan ushiinka wiishashka iyo isbarbardhiga Qolka musqusha ee qubayska leh oo leh laba HALLES FAUCET BATHROOM: tubada labajibbaar toos ah ayey u toosan tahay si loo saxo biyaha iyada oo la raacayo xakameynta heerkulka biyaha. LACAG LA'AAN ISTICMAALKA QALBINKA QALBIGA: SANK FAUCET OIL RUBBED BRONZE: labo gacanta ku haysa naqshadeynta tuubada naqshadaha caadiga ah. La dagaallanka daxalka. Boorso fadhigeedu hooseeyo oo kuxiran guri kiro ah, kiro cusub, guri dabaq ah, guri gawaarida, tareenada safarka iyo isticmaalka guriga. Fadlan nala soo xiriir haddii wax su'aalo ah jiraan.
SKU: 2321200RB Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: Qubeyska musqusha, kilinilaha xarunta, musqusha inch centre, Naxaasta Saliida Sunta Lagu Dhoobo
Waa qaabka aan ugu jeclahay. Waxay leedahay baakado wanaagsan, nabar malahan muuqaal ahaan, waana sahlan tahay in la rakibo. Qiimuhu waa macquul.
Ninkeygu wuxuu awooday inuu si fudud u rakibo! Aad ayaan uga faraxsanahay iibsigan. Waxay umuuqataa mid aad uga qaalisan sidii ay ahaan jirtay waxaanan kuhelaa amaan badan. Macaamiisha ugu sarreysa s
Aad baan ugu qanacsanahay qasabadani. Markaad damiso tuubada, birlabku sifiican ayuu u shaqeeyaa wuxuuna ku hayn karaa rusheeyaha gudaha. Wax cabasho ah kama haysto qasabadda.
Way adag tahay in la helo tuunbo sumadeed wanaagsan oo gadaal u socon. Kaliya waxaan isticmaalay qasabadda ilaa usbuuc hada sifiican ayeyna u shaqeysay ilaa iyo hada.
Tuubbo weyn oo tayo sare leh oo si fudud loo rakibo. Waxaan ugu soo iibiyay baddelkeyga biyaha kalluunka uu ku habboon yahay! Runtii aad ayaan uga helay!
Rakibo Easy oo u muuqataa weyn! Aad fasal u raadso kala bar qiimaha waxa aad ka heli lahayd dukaamada hagaajinta guryaha
Way adag tahay in lagu garaaco tuubadan qiimaha. Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigayga.
Ka dhakhso badan taariikhda bixinta la qiyaasay. Si fiican uxiran Aad u fudud fudud in la rakibo, oo umuuqda mid aad u heer sareeya. Waxaan badalay tuubada Delta, taas oo qiimaheedu yahay 4X inta badan, midkan cusubna wuxuu umuuqdaa mid kafiican oo si sahlan loo rakibo. Aad buu u cajab geliyay.
Wax soo saar aad u fiican oo aad u fudud fudud in la rakibo. Dhamaad fiican oo si fiican u shaqeeya.
Tayo culus oo wanaagsan, ayaa ku timid xirmo difaac fiican leh. Dhaqdhaqaaqa wanaagsan ee gacmaha iyo qufulka bulaacada. Mar labaad iibsan lahaa oo la rakibin lahaa qiyaastii bil.
Wax soo saar wanaagsan !! Super fudud rakib. Waxaan u isticmaali jiray inaan ku badalo tuubada ku jirta RV-ga waana fiicantahay, waxaan iibsanayaa wax badan si aan ugu badalo qasabadaha musqusha ee gurigayga.
Tayo wanaagsan, waxay samaysaa biyo fiican, oo si fudud loo furfuro hawada, naqshad qurux badan. La ogaaday in hal buro uu ka dabacsan yahay kan kale. Waa inuu noqdaa mid fudud. Guud ahaan, qiimo weyn oo loogu talagalay WOWOW iyada oo aan wax niyad jab ahi jirin. Iibsasho weyn!
La dhacsan tayada, muuqaalka iyo sahlanaanta rakibida… Inaan ku iibsaday ilbidhiqsi saxan kale!
Biyo shidashada ama demintu waa sax. Fiiri waa nadiif oo tayo leh. JACAYL qulqulka riixida! Aad uga sahlan ugana waxtar badan tii hore ee kabaalka kabaalka lagu jiido ee ay bedeshay!
Rakiibintu aad ayey u fududeyd in aan 14-jirkeyga sameeyo rakibidda (kormeerkeyga dabcan). Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigan.
Qiimuhu waa mid aad u tartan badan waxaanan jeclahay naqshadeynta shaashadda. Weelka si fiican loo xirxiray oo leh dhammaan aagagga la ilaaliyo Iibiyaha fadlan ha badalin baakadaha. shaqo weyn. ma hubo laakiin kuwani waxay umuuqdaan kuwa ka aamus badan qasabadihii ugu dambeeyay ee aan haysto.
Xaqiiqdii qurux! U shaqeeyaa si heer sare ah Ka dheer oo sii gaadhaya intaa ka sii badan kii aan hore u haystay. Ku habboon codsigayga. Dhamaystirka tayada! Caag maahan. Shaqo culus! Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigayga!
Tuubadaani waa mid tayo sare leh. Isku dayay inuu mid kale iibsado dhammaantoodna way baxeen. Waxaan u maleynayaa inaanan ahayn qofka kaliya ee ka helay.
Waxaan u guuray gurigayga cusub oo lahaa saxan fool xun. Tani way fududahay in la dhex dhigo waxayna umuuqataa wax lala yaabo!